कालो ढुसीको संक्रमण बाँके र काठमाडौंको संक्रमितमा देखिएको पुष्टि – Sapana Sanjal
June 1, 2021 196
Sapana Sanjal : १८ जेठ, काठमाडाैं ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार म्युकोरमाइकोसिस ‘कालो ढुसी’को संक्रमण देशका अन्य शहरहरुमा पनि देखिन थालेको छ । मन्त्रालयका अनुसार वीरगञ्जबाट देखिन थालेको यो संक्रमण बाँके, काठमाडौं लगायतका शहरमा देखिएको हाे ।
Prevजतिसुकै बिजी भए पनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : नपढे तपाईँ लाई पछुतो हुनेछ !
Nextखोकी र ज्वरोभन्दा पनि यी दुई लक्षण देखुनु को-रोनाको स्पष्ट लक्षण हो, कस्ताे छ त तपाईहरुकाे स्वास्थ ?
यीनै हुन् भारतीय एसएसबीले तुइन का’टिदिँ’दा महाकालीमा बगेका जयसिंह धामी